Nextcloud Hub 20 rutere na ndozi ndozi, njikarịcha na ndị ọzọ | Site na Linux
Ọchịchịrị | | Aplicaciones, Na-atụ aro
Mwepụta nke nsụgharị ọhụrụ nke ikpo okwu Nextcloud Hub 20, mbipute nke emeziwo mwekota dị iche iche na nyiwe dị iche iche (Slack, MS Online Office Server, SharePoint, MS Otu, Jira, n'etiti ndị ọzọ), na mgbakwunye na ụfọdụ mmelite njikarịcha na ndị ọzọ na-apụta ìhè.
Maka ndị na-amachaghị Nextcloud Hub, ha kwesịrị ịma nke ahụ nke a bụ ikpo okwu nke na-enye ihe nkwụsị iji hazie mmekorita n'etiti ndị ọrụ nke ụlọ ọrụ na ndị otu na-emepe ọrụ dị iche iche.
N'otu oge Nextcloud nwere igwe ojii nke na-enye ohere ịgbasa mmekọrịta nkwado na mgbanwe data, na-enye ike ịlele ma gbanwee data site na ngwaọrụ ọ bụla n'ebe ọ bụla na netwọk (iji ntanetị weebụ ma ọ bụ WebDAV). Enwere ike itinye ihe nkesa Nextcloud na Bochum ọ bụla na-akwado ederede PHP ma nye ohere SQLite, MariaDB / MySQL, ma ọ bụ PostgreSQL.
N'ihe gbasara ọrụ, Nextcloud Hub dị ka Google Docs na Microsoft 365, mana ọ na - enye gị ohere itinye n'ọrụ akụrụngwa zuru oke na - achịkwa sava nke na - arụ ọrụ na sava gị ma enweghị njikọ na igwe ojii mpụga.
Ozi kachasị nke Nextcloud Hub 20
Ọhụrụ a mbipụta arụ ọrụ iji meziwanye njikọta na nyiwe ndị ọzọ, ma nwe ya (Slack, MS Online Office Server, SharePoint, MS Otu, Jira na Github) dị ka ihe mepere emepe (Matriks, Gitlab, Zammad, Moodle.)). Maka mwekota, Mepee Mmekọrịta Mmekọrịta mepee REST API eji, nke e kere iji hazie mmekorita n'etiti nyiwe iji mekota onu na ọdịnaya. A na-atụ aro ụdị njikọ atọ:
Wayszọ dị n’etiti mkparịta ụka Nextcloud na ọrụ ndị otu Microsoft, Slack, Matrix, IRC, XMPP, na Steam.
Mgbanwe ọzọ dị mkpa na ụdị ọhụrụ a bụ nchọta jikọrọ na-ekpuchi sistemụ nsuso mpụga mpụga (Jira, Zammad), nyiwe mmepe mmekọrịta (Github, Gitlab), sistemụ mmụta (Moodle), ọgbakọ (Discourse, Reddit) na netwọkụ mmekọrịta (Twitter, Mastodon);
Kpọọ ndị na-achịkwa site na ngwa ndị ọzọ na ọrụ weebụ.
Ejikọtala usoro ọchụchọ ahụ, na-enye ohere n'otu ebe iji hụ nsonaazụ ọchụchọ ọ bụghị naanị na Nextcloud components (faịlụ, okwu, kalenda, kọntaktị, deck, mail), kamakwa na ọrụ ndị ọzọ dị ka GitHub, Gitlab, Jira na Nkwupụta Okwu.
Na mgbakwunye emegoro dashboard ohuru, ebe inwere ike itinye wijetị na imeghe dọkụmentị ozugbo na-akpọ oku mpụga ngwa. Wijetị na-enye ụzọ iji jikọta na ọrụ ndị dị na mpụga dịka Twitter, Jira, GitHub, Gitlab, Moodle, Reddit, na Zammad, lee ọnọdụ, gosipụta amụma ihu igwe, gosipụta ọkacha mmasị, listi nkata, ozi ịntanetị dị mkpa, mmemme kalenda, ọrụ , ndetu na nyocha.
Na Okwu agbakwunyere nkwado maka ịkọwa nyiwe ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ụlọ nkata nwere ike ijikọ na otu ọwa ma ọ bụ karịa na Matrix, IRC, Slack, Otu Microsoft. Ọzọkwa, Kwuo awade interface iji họrọ emojis, preview downloads, igwefoto na igwe okwu ntọala, ịnyagharịa na mbụ ozi mgbe ị pịa a quote, na ogbi sonyere iji a moderator. A na-enye modulu iji jikọta ikwu okwu na dashboard na nchọta ọnụ.
Ọzọkwa gbakwunyere ikike iji chọpụta ọnọdụ ha, ebe ndị ọzọ nwere ike ịchọpụta ihe onye ọrụ na-eme n'oge ahụ.
Kalenda ndị na-eme atụmatụ nwere ihe nlele ugbu a, E degharịrị nhazi ahụ ma tinye modulu maka mwepu dashboard na ọchụchọ dị n'otu.
Na interface maka ịrụ ọrụ na email, e gosipụtara usoro ngosipụta mkparịta ụka gbasara eri, emeziri nke oma aha aha na IMAP ma etinyere ngwa ijikwa igbe ozi.
Usoro azụmahịa njikarịcha azụmaahịa na-akwado ọkwa ịkwanye yana ikike ijikọ na ngwa weebụ ndị ọzọ site na njikọ weebụsaịtị.
Agbakwunyere nkwado maka njikọ kpọmkwem na faịlụ dị na Nextcloud na ederede ederede.
Njikwa faili ahụ na-enye ikike itinye nkọwa na njikọ nke akụrụngwa akọrọ.
Emekọrịta ihe na Zimbra LDAP etinyere ma tinyekwa LDAP maka akwụkwọ adreesị (na-enye gị ohere ịlele otu LDAP dị ka akwụkwọ adreesị).
Planninglọ atụmatụ atụmatụ ụlọ ahụ na-enye dashboard, ọchụchọ na njikọta kalenda (a ga-enyefe ọrụ na usoro CalDAV).
Gbasaa nzacha ikike.
Emebere usoro mkparịta ụka iji dezie eserese ma tinyekwa ọrụ iji debe map niile.
Achịkọtara ọkwa na omume n'otu ihuenyo.
N'ikpeazụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere ya, ị nwere ike ịlele njikọ ndị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Nextcloud Hub 20 biara na ndozi mmekorita, njikarịcha na ihe ndị ọzọ
Vidio Youtube bibiri Hacktoberfest